Qiso Xanuun ah : Siduu naag kale ugu fikiraa ama uu u damci karaa anigu miyaan ku filnaan wayeey!! - Galmada.net
Qiso Xanuun ah : Siduu naag kale ugu fikiraa ama uu u damci karaa anigu miyaan ku filnaan wayeey!!
April 13, 2017 June 11, 2017 admin
Waxan aad iyo aad uga xishooda hadaana aad ula yaabay marwoyiin badan wax yaabahay ku dhaqmayaan markay arkan in Alle kor ahaye siyey sayi u wanaagsan dabci wanaag iyo akhlaaq diin Alle ku manaaysteey aay xad kooga dhafaan gurigi iyo caruurta korintoda iyaagu masuuliyadoda iyo xil keegaba iyaadu saran tahay ayeey miskiinki kaga caraarta ooy ka maqnada weegaag & bil.
Waxa dhici karta inaay isku dayeeyso dhibato yar oo dheexdoda yilaay siidi ay uga aar go’saan laaheyd islamarkaasi cadaab uga dhigto gurigi iyo caruurti inay kaga baaxsado iskana maqnaado intaay doonto ama aay u sheeko taagto eheelka ama naago kale oo maagaloyin kale degeen gurigi iyo caruurtina isaga kaga taagto isagoo aan marna sharaftisa u aheyn guri daaqid iyo caruur haayn.
Ninku waa boqorkaa guriga wa maamuulihi qoyska amarkisa la’aantiina wax soconaynin isaga waxa loo xiil sarey masruuf kooga iyo inu xaaladooda kolba xagay socodo ka war hayo ceeb ma aha inu sacido qoyskisa maraarna galo jikada ama xaaqo dhulka marwadisa markey jiran tahayna waajib tahay inu sacido kana cawiyo guriga caruurta iyo cafimaadkeega ilaa inta ka cafimadayso wax laaga xishoodana ma aha oo Nabigeeni suubana scw aya sacidi jirey qoysaaskisa.
¤Waxa sabaaba inu ninku marwadisa la guursado isago u wanaagsan sifahan kor kuso sheegney iyo kaar kaalo badan iyo hadu ku aamro inaay bixin ka dhaago adeegta oo iska baxda idin la’aantisa xiligey doontana guriga timaada,waxa dhici karta inu raadsado guri u ku naasdo iyo marwo salixaad amarkisa ka danbeysa oo aan didiin u dhago nugul.
Marku sayigeedu heelo minyar u wanaagsan iyo guri u ku naasto ayeey miinweynti indhaho taag taag iyo su’aalo faro badan is waydisa maseer kii marwoyiinka maatanaha laa ahana so food sara oo buuk iyo qaylo kubilow daa sayigeedi u wanaagsana si fuduudnaa gacmaheegi uga baaxa minyartina ku guuleeysada in gacantedi si buuxda usoo gaalo.Marwo idaan la’aanta ninkega baxdana ma oga in mala’igtu naclado ilaa inta guriga kaso labaan.
Marwo: Sidu naag kale ugu fikiraa anigu miiyan ku filnaan wayeey!!
¤Maa is waydisaay marka hore waxaa laagula guursaday,Dabcaan jawaabteedu waxay u fuduudahay mawarda caqli badan!!Adigo kaali lagu qabay oo naagna kula wadaagi jirin sayigaada in maanta naag kale daris kula noqoday subax waalba agtaada laga soo kici jirayna yaaraday madaama minyar dariis kula noqoday misee waxad baraarugda goor ay xeedho iyo faan-dhaal kaala dhaceen!
¤Hadaba marwo yaahay intaanu gacantada ka biixin sayigada dhaqo noqo marwo salixaad akhlaaq iyo dabci wanaag odhaan ku siifowda noqo mid sayigeeda qalbigisa khasbata kuna beerada qalbigisa jeceyl iyo kalgaceyl ka dhig sayigaada boqorka guriga amaarkisa laga daanbeeyo dulqaad iyo dabaacsanaan u muuji Romatic ka noqo dhaan walba ilaali sankisa indhihisa intaanu kuso rawixin caruurtisa iyo adiguba u laabista idinko ugdoon iyo gurigo nadiif ah udgoona ah.
Marku albaabka kaso gaalo ku salaan salaanta islaamka sharab qabow usi diyaari marku so gaalo afka u gali amaan iyo dholo cadayn kuso dhawey bar caruurtisa inay abahood salaanta islaamka ku salamaan u sheeg in abahood uso shaqeyey oo u dalaan yahay kana ilaaliyaan qaylada iyo buuka usi diyaari qaado aad si heer sare u samaysay maalin walba noc u kaari.
Marwo: Sideen qalbigisa ugu beeran kara inuu aniga un iga fikiri!!
Su’aashani waay fududahay marwadi laa waafajiyo khayrka iyo wanaag kula dhaqanka sayigeeda,waxa ugu horeysa inaad noqodo qof Alle kor ahaaye ku dhawaada xusid iyo cibaado badan garatana sayigeeda xaquuqdu ku leeyahay tahayna xaquuqdisu mid adaag oo aan sahlanayn imtaxaan adaagna ah haday iska guutadana aduun iyo akhiro liibanayso janada albaabkey doontana ka galayso haday amarkisa adeecdo waxi shareecada diinta islaamka ka hor imanaya un xaq u letahay inaay kaa diido.
¤Marwo yahay sayigaadu waxu jecel yahay inaad habeen walba diyar u ahaado.
¤Maa jecla raggu marwadisa oo muran ka dhalisa xaqkisana ka duudsiisa waxana dhici karta inu ku fikiro naag kale.
¤Wuxu jecel yahay marwadisa oo iiskeeda ku garada wuxu sayigeedu ka heela bahiidisana indhahis aka akhrisan karta oo fahmaysa.
¤waxay jecel yihin raggu marwadiisa aan diiday odhaan marku gogoshiisa ugu yeedho iyado xushmad ka muqado iyo dhola caadayn amarkisana fuulineysa una degdegda xaata ale haka yeele adigo muufo u tubaaya ama hawlo kale odhan jecleysan inaad ka tagto haya u degdeg amarkisa fuuli yaanu ka arkin calaan caal iyo wan daalanay iyo karahiyo taasi qalbigisay dawaacaysaye ka ilaali.
¤Gabadh aya u timid nabiga salaalahu calayhi wasalaam,waxay u sheegtey inaay guursan rabto waxay waydisay xaqu ku leyahay sayigeeda Rasulki salaalahu calayhi wasalaam wuxu ku yiri.Waxa ka mid ah hadu doono inu u gaalmoodo iyado rati dushiisa saran aanay ka diidi karin.
Hadaba marwo yaahay noqo mid sayigeedu marku arko ku farxa marku baxayana isago wajigisa rayn reyn iyo farxad degeenaasho ka muqado ku baxa,marku so noqdana isago xiiso weyn iyo farxad ku haya kuso laabta,marku ka baxaana nusasac ka dhib u dir sms text u sheeg inaad u xiisday guriga isaga la’aantis u muugdi yahaay,marku shaqada kaso laabto ka ilaali qaylada caruurta sharab qabow sii intu nasanayo hala hadlin u qaadi qadadisa u diyaari sabuntisa iyo duwaalkisa u diyaari gogoshiisa unsi iyo parfume udgoon ku shuub aan dhib u keniin sankisa udgoonkisana la raaco.
Marwo: Waaxa hubaalti ah inuu naag kale ku haamiyin qalbigisuna kuso dhicin.
¤Noqo hooyo wanaagsan oo caruurteda ku filaan habeena ka dhixin meelna uga taagin culeysna sayigeeda saarin.
¤Noqo marwo salixaad xusidda iyo cibaado badan Alle’naa ku dhawaada cilmiga baraata caruurtaana barta.
¤Noqo marwo ku dadaasha raali galiinta sayigeeda qalbigisa iyo indhiisa ka akhrisan karta bahiidisana fahmeysa.
¤Noqo marwo marku sayigeedu murugodo is garaab taagta shar iyo khayrna la wadaagta.
¤Noqo marwo marku sayigeeda faqri noqdo ku dadaasha sidii ay uga sari laheyd farqinimada tajirna uga dhigi laheyd.Sadaaqo aad la baxdoo iyo sadaaqo sayigaada siisoo waxa ajir badan kaan aad sayigaada siisay sida nabiga salaalahu calaayhi wasalaan yiri.
¤Noqo marwo leh sifaahi khartidi iyo dumarnimadi lagu yaqaanay hooyoyinki hore.
¤Noqo marwo caqli badan oogsoon sayigeeda iyo iyaadu isku naf kaaliya yihin nafteeda iyo maal keegana u hurdho.
¤Noqo marwo ninkeega adeecda kuna casiyin,sayigaada ood ku caasida waxay so dedeejisa burbur iyo in minyar lagula guursado.
¤Noqo marwo iyo hooyo wanaagsan oo gurigeeda iyo tarbiyada caruurteda masuuliyaad adaag iska sarta.
¤Haa noqon marwo gurigeeda loo sheeko imaado oo naago badan sayigaaduna meel u ku naasdo waaya,isaago daalan sabaabnaa u noqdoo inu guriga saxiibki ama walidkis u nasaasho taago.
¤Noqo marwo iska ilaalisa naagaha telfoonka badaan ee subax iyo habeen iska so dhacaya.
¤Noqo marwo marki masibo iyo qadar Alle laso gudboonado shugriga iyo Alle ka cabsida badiisa samir kaana badiisa qadarta rabbana ka raali noqoda.
¤Haa noqon marwo qayano iyo been u kala kulmo,noqo marwo dacaad u ah sayigeeda.
¤Noqo marwo gurigega dheexdiisa si heer sare sayigeeda ugu laabisada maalinba labiis qurxoon maaliba labiis cusub oo qurxoon u xiidho ilaali indhihisa sankisa raggu waxay jecel yihin marwadisa isku qurxisa banaanka markey adaysana caadi iska dhigta oo sifican isku asturta iyado racaysa amarka Alle swt kor aahaaye iyo rasuulkisa salaalahu calayhi wasalam,marwoyin waxad arkeysa ku dhahayo maxad ku falaysa duruc iyo waxa lo xidha aroosyada diricu noocu doonnaba haa ahaade way kula yabaaysa inaad u xiidhado sayigaada guriga dhexdisaana kunaa laabisado waxa ka dhadhaacsan marwoyinka karkood in aroosyada iyo banaanka siday jeceshay u laabisaadaa waana firkaad aad u qaldan diintana khilaafsan gabadhta muslimada marwo ha ahaadee ama gabadh guursan markay banaan ka adaayso wa inay dhar adaag oo jidhkeega asrutayo xidhaadho haday cadarka lagaamaa marmaan noqodo ay kilkilaha ku shubado deo-deroon aan uur dhereyn dadkana urineynin tasa u khayr badan aduun iyo akhiro,gurigeeda sidaay doonto ha ugu laabiisaato Make’Up ugu horeya ayey marsan karta kana cajisin isku nadifiinta iyo isku qurxiinta sayigeeda taasi waxaay ku abuureysa xiiso badan iyo jeceyl inu ku qaado waana guul aad gaadhay qayr kaana dhaftay.
Marwo waalba ha ogaado in sayigeeda xaquuqdeda gutaan karin marwo gutaan kartana aysan jirin waxa see laaga raba marwo kasta inay dadaal xoogan u gasho geed dheer iyo mid gabaan u korto siday qalbigisa ugu dhex noolan laheyd cimrigeega indha uga dhimaana iyaada la qaadan laaha taasina wa guul kuso hooyday marwo waalba iyo khartideeda weeye marka
Ciidamada Amisom oo maanta garoonka diyaaradaha ku bahdilay Wasiirada Gargaara & Fariin ay soo dhigtay…
Ma Tahay Qof Shaki Badan Hadaba Baro Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Shakiga Badan..!!!